Default Musoro - £ 49.99 GBP uwandu
kana 6 vhiki nevhiki isina mubhadharo kubhadhara kubva £ 8.33 ne
Chii chinonzi Ligandrol LGD4033?
Imwe yeSARM ine simba pamusika, Anabolicum/ Ligandrol (LGD4033) iri yechipiri kune kana zvasvika pakuvandudza mhasuru yemhasuru uye nekutsanangudza patsva masimba emagetsi. Mhedzisiro yeSARM iyi inogona kubva pakucheka kunoshamisa kusvika pakuwandisa kushandurwa kwemuviri. Pakati pechikamu chekubvongodza, vavaki vemuviri vanogona kutarisira kuwana mhasuru uye simba kuwana izvo zvinogona kuchengetwa nyore uye kwenguva yakareba kana zvabatanidzwa nemari chaiyo yemacronutrients uye macalorie.
LGD-4033 inoshanda nekusunga kune androgen receptors mumuviri mune ese mapfupa uye mhasuru nyama. Iyi SARM inoshanda zvakaenzana kudzivirira kuparara kwemhasuru. Anabolicum ine inoshamisa bone kusimbisa uye kuporesa zvivakwa.
Kubatsira kweAnabolicum (LGD4033)
Inowedzera kuonda kwemhasuru.
Yakagadziridzwa kuumbwa kwemuviri.
Kukurumidza simba kugadzirisa.
Inobatsira kuchengetedza zvakawanikwa zvakaoma.
Inodzivirira kupera kwemapfupa.
Zvakakwana kuita mabasa akawanda.
Inoshanda kurapa kushomeka kwe testosterone.
Zvakanakisisa kubhara gapakati pakati pemakomba.
Hazvikonzere huturu huturu.
Hazvikanganise cholesterol mwero, itsvo, prostate, kana BP.
Mashandisiro Aungaita Anabolicum (LGD4033)?
Anabolicum inoshandiswa zvakanyanya mumasekonzi emavhiki masere kusvika gumi nemasere nevarume nemavhiki masere kusvika matanhatu nevakadzi kunyange izvi zvichizosiyana zvichienderana nezvinodiwa nemunhu uye zvinoda kutenderera.
Iyo yakakurudzirwa muyero weAnabolicum ndeye 5-10mg mazuva ese, kunyanya maminetsi makumi matatu kusvika makumi mana usati wadzidzira uye mushure mekudya, mukutenderera kwemavhiki masere kusvika gumi nemaviri evarume.
Chipimo chemushonga weVakadzi
Kune vakadzi, iyo inokurudzirwa dosi yeAnabolicum ndeye 2.5-5mg mazuva ese, kunyanya maminetsi makumi matatu kusvika makumi mana usati wadzidzira uye mushure mekudya, mukutenderera kwemavhiki matanhatu kusvika masere.
Chigadzirwa Hafu Hupenyu
Hafu yeupenyu yeSARM iyi yakatenderedza maawa makumi maviri nemakumi maviri nemaawa uye nekudaro kamwe pazuva pazuva dosing yakanaka.
Anabolicum inonyanya kukomberedzwa nemaSARM senge Cardarine, Ostarine, uye Testolone. LGD4033 yakanakisa yakarongedzwa neNutrobal (MK-677) mune yekudyara stack yezvinhu zvinowirirana mhedzisiro. Kutenderera uku kwaizobatsira mukuvaka yakasimba mhasuru saizi uye saizi kukura paunenge uchivandudza kupora, pfungwa yekugara zvakanaka, uye yekurara mhando.
Vashandisi veLGD-4033 vakashuma kuvandudzwa kukuru maererano nemhasuru uye simba. Zvinoenderana neongororo dzepamhepo paSARM dzakakurumbira uye maforamu ekuvaka muviri, vashandisi vakasangana nekurasikirwa kwemafuta uye mhasuru kuwanda kwemapfupi munguva pfupi sevhiki ina kusvika matanhatu. Vamwe vashandisi vakataura kuti kugona kwavo kubata kwakanyanya mashandiro neanosvika makumi mana kusvika makumi mashanu muzana. Nekushandisa iyi SARM kwemavhiki matanhatu kusvika masere, vashandisi vanogona kutarisira kuomarara, kuchenesa, uye kugadzirisa vascularity panguva yekucheka chikamu.
Tinokurudzira Mini PCT neichi chigadzirwa. 4-6 mavhiki akakodzera.
H B. Yakadzokororwa naH B.
Kukurumidza kuendesa, kuvimbika, kuvimbika
Claudio P. Yakadzokororwa naClaudio P.
Kurasikirwa kwemafuta uye mhasuru kuwanda.
SJ Yakadzokororwa naSJ
Chaizvoizvo inoshanda, inokurudzira zvikuru
Jordan C. Yakadzokororwa naJordan C.
10/10 - Kukurumidza kutumira! Chaiyo-dhizaini zvigadzirwa.
Yakasvika nekukurumidza nekukurumidza. Kucherekedza mhedzisiro pane 1 tebhu pazuva nekukurumidza. Wakambove wakagezwa nemamwe mabrand. Ndichave ndakanamatira kune vakomana ava kubva zvino zvichienda mberi. 10/10.
Tom Yakadzokororwa naTom